पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपाली महामन्त्री उठ्छु | Online Nepal
डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्री छन् । संविधानसभा सदस्य उनले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गरेका छन् । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा डा महत परिचित छन् । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका डा महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा प्रकाशशरण महतलाई किन मत दिने भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँ कसरी दिनुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन ? त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन ? यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन ? तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन ? यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा । तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मा¥यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
मुलतः त्यो भ्रमण भारतको सत्तारुढ दलको आमन्त्रणमा नेपली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट भएको हो । मैले अघि नै भनेँ कि हिजोको अपरिपक्व र ढुलमुले नीतिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘ड्यामेज’ गरेकै हो । हामीले वैदेशिक सहायता लिने काममा होस् या विदेश नीति सञ्चालन गर्दा पनि अत्यन्तै परिपक्वता आवश्यक छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रभागमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा देशलाई एक र अर्काेलाई अर्काे मापदण्ड अपनाउनु हँुदैन । यस्तो भयो भने देशका लागि घातक हुन्छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा होस् या अरु बेला नै किन नहोस् आफ्नो देशको फाइदा हेरेर नै कुरा गर्ने गर्दछु । त्यसरी आफ्ना देशको पक्षमा कुरा राख्दा उहाँहरूले सहजरूपमा लिएको पाएँ । यसपालिको भारत भ्रमणमा पनि मैले यो पक्षलाई जोड दिएको हो । हाम्रा दुई देशबीचका कतिपय असमझदारीहरूलाई पनि मैले त्यहा राखेँ । ठोस, स्पष्ट र आधारसहित मैले हाम्रा मुद्दाहरू राखेँ । त्यहाँ रहँदा भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका अध्यक्ष, भारतीय विदेशमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेँ । यसबाट हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका साथै भारतीय सरकार र हाम्रो सरकारबीचका कतिपय मुद्दाहरूमा कुराकानी भयो र यसबाट द्धिपक्षीय समझदारीहरूमा वृद्धि भएको छ ।
नेपालप्रति हाम्रा मित्र तथा शक्ति रष्ट्रहरूको ठूलो सद्भाव छ । तर पनि यसको फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौँ । हाम्रो यस्तो प्रवृत्ति छ कि राष्ट्रवादका ठूला कुरा जनतातर्फ फर्केर गर्ने र नारा लगाउने तर सम्बन्धित ठाउँमा भने राख्न नसक्ने । यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ र उता हाम्रा मित्र रष्ट्रहरूको सद्भाव प्राप्त गर्न पनि सकेक छैनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा या यहाँले भनेजस्तै पछिल्लो पटक भारतको भ्रमण गर्दा पनि यी पक्षहरूलाई थप स्पष्ट पार्ने काम मैले गरेको छु ।-रासस
डा. प्रकाशशरण महतसहमहामन्त्री महत
कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि कोरोना संक्रमण
न्यायालयको निकास न्यायालयले नै खोजोस् : प्रकाशशरण महत
नेपाल-भारत धेरै नजिक छ, कहिलेकाहीं असमझदारी देखिनु स्वभाविक नै हो: प्रकाशशरण महत
कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच दिल्लीमा भेटवार्ता, तुइन प्रकरणबारे छलफल
भाजपाको निमन्त्रणामा महत नेतृत्वको कांग्रेस टोली भारत प्रस्थान